UANDRE 3000 WAMANGALELWA NGOKUTYHOLWA NGOKUBA 'KWIKLASI YE3000' - IINDABA
UAndre 3000 Wamangalelwa ngokuTyholwa ngokuba 'kwiKlasi ye3000'
UAndre '3000' uBenjamin ngumxholo wesimangalo esithi Ngaphandle UMC webe izimvo zokucinywa kwakhe ngoku Inethiwekhi yopopayi uthotho 'Udidi lwe3000' ovela kumsebenzi weposi waseBoston / owayesakuba ngumfundi wobugcisa ogama linguTimothy McGee, ngokwe I-blog yeBostonHerald.com Ngaphakathi komkhondo [nge Amatye agiqekayo Iliwa kunye noLuhlu lwemihla ngemihla ].
Isuti ibango lokuba ngo-1997, uMcGee waphakamisa umboniso ophilayo obizwa ngokuba yi-'Music Factory ye-90s 'ukuya kwi-Cartoon Network ye-vice-president wenkqubo ka-Michael Lazzo. Umboniso wenqatshelwe. Ngaphakathi Track inika ingxelo yokuba le suti ithi, 'ukufana phakathi kokuchazwa komsebenzi kaMnu McGee kwi' The Music Factory 'naleyo' yeCandelo lama-3000 'kuchazwe ngokwaneleyo kwaye kugcwele.
Umzekelo, i-'Factory Music 'ibonakalise' uhlobo oluncinci lwenkampani 'kunye neminqweno yemveliso yomculo kunye' nolawulo olupheleleyo lwesimo sengqondo sabasetyhini, injineli yesandi esincinci, imvumi esencinci yaseAsia, kunye nendawo imvumi eselula enamandla.
'Udidi lwama-3000', kwelinye icala, lwalunomvelisi womculo onamandla, onomdla, 'onzima, onobukroti-ngesimo sengqondo' somdlali womtya wasetyhini, 'umdlali wezobuchwephesha bobuchwephesha, kunye namawele anetalente yobuhlanga baseAsia,' isuti ithi, 'kuPhakathi woMkhondo.
imovie emfutshane yokutshata
Ngokwesi suti, uMcGee wayefuna uKenny 'Babyface' uEdmonds ukuba abambe i'Music Factory '; UAndre 3000 wabamba 'iklasi ye3000'.
Isimangalo sikaMcGee sityhola uBenjamin, iCartoon Network, kunye neTurner Broadcasting 'yokophula umthetho, ukophula isivumelwano, nokusetyenziswa gwenxa kweemfihlo zorhwebo.' Njengentlawulo, icela zonke iingeniso ezivela kumboniso, iifizi zomthetho, kwaye 'nantoni na le inkundla inokuyithatha ngokongeza ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.'
UJerrold Neeff, igqwetha likaMcGee kunye noprofesa wezomthetho kwiYunivesithi yaseBoston, uxelele i-Inside Track, 'Sicele i-2 yezigidi zeedola kumonakalo ukuza kuthi ga ngoku, kwaye enye intsalela isamele ukubonwa.'
Inethiwekhi yeKhathuni uxelele ngaphakathi Track ukuba bayayazi isuti, kodwa khange banike zinkcazo.
ijeff iibhulorho zokulala iiteyiphu
tyhala u-barman ukuvula amanxeba amadala
I-asidi rap ithuba lokuba umrepha
Iintsomi zejusi wrld azize zife
Nicki minaj uluhlu lwezinto ezipinkiweyo